Indlu yonke enomoya, ikhitshi eligourmet, amagumbi amabini okulala. - I-Airbnb
Indlu yonke enomoya, ikhitshi eligourmet, amagumbi amabini okulala.
Floresta Sul, Acre, Brazil
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguEverson
Indlu entsha kraca, ine-air-conditioning ngokupheleleyo, ene-air conditioning kuwo onke amagumbi, ikhitshi elimnandi, indawo engaphandle enebarbecue, ipholile kakhulu, nayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale ngokukhululekileyo nangokukhuselekileyo. Kufuphi neDyunivesithi kunye nezakhono, ivenkile kunye neendawo ezininzi zorhwebo. Igaraji yemoto enye.
I-Suite ene-air conditioning, i-queen bed, i-wardrobe enkulu ene-hangers, igumbi lokuhlambela elikhulu elinezinto ezininzi zococeko, kunye neshawari eshushu nebandayo.
Igumbi lokulala elinebhedi enye, idesika, umoya kunye nesipili.
Ikhitshi eligourmet elineoveni, indawo yokupheka, imicrowave, zonke izixhobo ezifana neepani, izinongo kunye namanzi omkhenkce.
Igumbi lokuhlambela loluntu kunye nezinto ezisisiseko zokucoceka kunye nokuhlobisa okukhethekileyo, ngaphandle kwamanzi ashushu.
Igumbi elitofotofo kakhulu elinebhedi yesofa, umbhoxo opholileyo, 40” 4K umabonwakude, nokufikelela kwiNetflix kunye neAmazon Prime, umoya womoya.
Iveranda engaphambili eneehammocks kunye nebhentshi yokonwabela ukutshona kwelanga kunye nempepho yasemva kwemini.
Indawo yenkonzo enomatshini wokuhlamba, abanini benetha kunye nendawo egqunyiweyo.
Umhlaba yonke ingca ngethumbu lokuhlambela okuya kukwenza uhleke kakhulu, kwaye asinakulibala malunga nezityalo ezisasazeke kuyo yonke indlu nakwiyadi yangasemva. Kubalulekile: Ukutyelela indlu rhoqo ngeentsuku ezi-2 okanye ezi-3 kuya kwenziwa ukunkcenkceshela izityalo kunye nokugcina igadi.
Kufuphi kudederhu lweevenkile zesixeko, iikholeji zikawonke-wonke kunye nezabucala kunye nemizuzu emi-5 yokuqhuba ufika epaki ye-tucumã, ukonwabela ukuhamba okanye ukuncokola kwi-kiosk.
Indlu ene-alarm system, ucingo lombane, i-concertina, iikhamera zokhuseleko zangaphakathi nangaphandle.
QAPHELA: INDLU INENKQUBO YOKHUSELEKO YANGANGAPHAKATHI NANGAPHANDLE, NEEkhamera EZIMBINI. Enye ikhamera ikwigumbi lokuhlala kwaye enye ikwiveranda engaphambili, ibeke iliso kwindlela yokungena kwindawo yokuhlala. Akukho khamera okanye inkqubo yokurekhoda kwiindawo ezisondeleyo zendlu njengamagumbi okulala kunye negumbi lokuhlambela. Iikhamera zenzelwe kuphela ukuqinisekisa ukhuseleko lwendlu kunye neendwendwe, njengoko ichitha ixesha elininzi livaliwe. Konke oku kuhambelana nenkqubo yabucala evunywe ngu-Airbnb.
4.93 · Izimvo eziyi-28
Indawo entsha, ecwangcisiweyo, ingena umoya kakhulu, ithule, inezitrato ezibanzi zokuhamba, kufuphi ne-mall yesixeko (i-5 min walk), iikholeji kunye ne-tucumã park.
Umbuki zindwendwe ngu- Everson
Ifumaneka ngemibuzo nangaliphi na ixesha lemini, ngomyalezo obhaliweyo, iapp yemiyalezo okanye iminxeba. Nawuphi na umbuzo uqhagamshelane.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Floresta Sul